पाठेघरको टियुमरका लागि अब अप्रेसन गर्न नपर्ने
अब पाठेघरमा भएको टियुमरका लागि अप्रेसन गर्न नपर्ने भएको छ । ललितपुरस्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पतालको इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजिष्टहरुले नेपालमै पहिलो पटक पाठेघरमा भएको फाइबर(टियुमर)लाई युटेराइन आर्टरीको इम्बोलाइजेसन गरी उपचार गरेका छन् ।
पाठेघरलाई आपूर्ति गर्ने आर्टरीलाई बन्द गरी फाइबरलाई निष्किृय पार्ने पद्धति(युटेराइन आर्टरी इम्बोलाइजेसन) मार्फत एक महिलाको सफल उपचार गरिएको हो । उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरु मध्येका एक डा. ओम बिजु पन्तले यस किसिमको अभ्यास नेपालमा यसअघि नभएको र पहिलोपटक सफल भएको बताएका छन् ।
उक्त इम्बोलाइजेसन प्रक्रियाको उपचारमा नेपाल मेडिसिटी अस्पतालको रेडियोलोजी विभाग प्रमुख डा. रामकुमार घिमिरे, इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजिष्ट डा. ओम बिजु पन्त, एनेस्थेसियोलोजिष्ट डा प्रज्वल भट्टराई र डा. हेमन्त अधिकारी संलग्न थिए ।
इम्बोलाइजेसनले ट्युमरमा रक्तसञ्चार बन्द गराई टियुमरलाई घटाउँदै लैजाने काम गर्दछ । यो प्रक्रिया ३७ वर्षीया एक महिलामा गरिएको हो जसमा बहुसंख्यामा ट्युमर देखिएको थियो । यसअघि ट्युमर भएमा शल्यक्रिया गरी पाठेघर फाल्ने या ट्युमर फाल्ने गरिन्थ्यो ।
९ असोज, नवलपरासी । नारायणी नदीमा आएको बाढीले चितवन राष्ट्रिय…
१० कैदीबन्दीमा कोरोना
९ असोज,बनियानी । जिल्ला कारागार झापाका १० जना कैदीबन्दीमा कोरोना…